Facebook Fan Page Auto Feed အတွက် နောက်တစ်နည်း ~ လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်
Facebook Fan Page Auto Feed အတွက် နောက်တစ်နည်း
အရင်က ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ တစ်နည်းနဲ့ ပြခဲ့ပါတယ် ... အဲ့ဒီ့ နည်းလေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုဒ်က ခေါင်းစဉ်ကလေးကိုပဲ ပြတာပါ ... အခု ဒီနည်းကတော့ ခေါင်းစဉ်အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ Post က စာမြည်း အနေနဲ့ စာလုံးရေ ၂၅၀ ကိုပါ ပြပေးပါတယ် ... စာမြည်းဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန် စိတ်ဝင်စားသွားပြီး ကိုယ့်ဆီ ကို ပိုပြီးတော့ ရောက်လာနိုင်တာပေါ့နော် ... ဒါကြောင့် ဒီနည်းလေးကို ရှာပြီးတော့ ပြပေးလိုက်တာပါ ... တချို့ တွေလည်း သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. FB fan page auto feed အတွက် ရှာနေသူများ အဆင်ပြေအောင်ပါ ... အရင်ဆုံး Fb မှာ အကောင့် ၀င်ထားလိုက်တာ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ... ၀င်ပြီးသွားရင်တော့ အောက်က လင့်ခ် ကလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ....
နှိပ်လိုက်ရင် အောက်က စာမျက်နှာလေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ....
အဲဒီ့ စာမျက်နှာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပြထားတဲ့ အတိုင်းလေး Add New Publishing Plan
ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ... အဲ့ဒါဆိုရင် သူက နာမည်ထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် ... ကိုယ့် Blog ရဲ့ Url ကိုထည့်လိုက်လည်းရပါတယ် ... ထည့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...
ပေါ်လာရင်တော့ အဲ့ဒီ့မှာ Add New ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ... နှိပ်လိုက်ရင် Box ကလေး တစ်ခု ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ် ....
အဲ့ဒီ့မှာ အပေါ်ကအတိုင်းလေး ထည့်လိုက်ပါ ... Blogname ဆိုတာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Blog address ကို ထည့်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် Add Source ဆိုတာကို ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ .... ထည့်ပေးလိုက်ရင် အောက်က ပုံလေးနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...
အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင် .. Feed Title ဆိုတာမှာ ကိုယ့် ရဲ့feed မှန်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆိုဒ် နာမည် ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ....ပြီးရင် Update Frequency ဆိုတာမှာကတော့ As soon as possible ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ..ပြီးရင်တော့ Save လုပ်လိုက်ပါ ... Maximum Posts per update ဆိုတာမှာကတော့ကိုယ့် က တခါ Update တင်တိုင်းမှာ ပိုစ့် ဘယ်နှခု တင်မလဲ ဆိုတာပါ ..ပထမဆုံး တင်တာမှာ ပြဿနာ ရှိမှာ မဟုတ်ပေမယ့် .. နောက်ပိုင်းကျရင် ပိုစ့်တွေက ထပ်သွားမှာပါ .... အဲ့ဒါကြောင့် 1 post ပဲ ထားတာ ကောင်းပါတယ် ....
အိုကေ .. အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကနေပြီး feed ယူတာပြီးသွားပါပြီ ... ပြီးရင်တော့ ဘယ်ကို သွားပြီး တင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ Target ကိုရွေးပါမယ် ....
Target ဖက်က add new ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ...
နှိပ်လိုက်ရင် အောက်က ပုံလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...
ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Choose Target မှာကိုယ့်ရဲ့ Page လေးကို ရွေးလိုက်ပါ ... ရွေးပြီးရင်တော့ Save Change ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ... ဒါဆိုရင် တော့ ပြီးသွားပါပြီ ... ပြီးသွားပြီဆိုတာက ချိတ်လို့ ပြီးသွား ပြီ ကို ပြောတာပါ .... နောက် တစ်ဆင့်ကျန်သေးပါတယ် ....
အပေါ်က ပုံလေးက လို ခလုပ် ကလေးကို Off ကနေပြီးတော့ On ကို ပြောင်းပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ တကယ်ပြီးသွားတာပါ ... ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ Blog မှာ Post တင်ကြည့်လိုက်ပါ ... ခဏ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ ... တက်လာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ...
အားလုံး အစစအရာရာ အရင်ထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် ...
Categories: Blogging , Tips , Website
Posted on Monday, May 06, 2013 by Unknown